N'èzí sports acha mummy ihi ụra akpa nwere ike b ...
Abụọ-agba kpachie oge ufodu envelopu na-ehi ụra akpa ...
Single Envelopu Splicable Ihi ụra akpa na Solid Co ...
Ozuzo shei waterproof rip-akwụsị obere milita ...
Hot ire magburu onwe mmiri ọgwụ ọchụ windproof mummy s ...
2020 emeputa elu 90% ala jupụta ụra ...
2020 factory oyi okenye n'èzí maa ụlọikwuu ọbọgwụ / ọgazị ...
2020 New imewe emeputa ìhè okomoko comfortabl ...
N'èzí egwuregwu nwee mummy ihi ụra akpa na ike ga-eji na ọkachamara ubi OEM
Anyị bụ ndị a ụlọ ọrụ na ihe karịrị afọ 20 'ahụmahụ nke mmepụta na n'ichepụta nke ala ngwaahịa. Iji izute dị iche iche ojiji Mpaghara na ọkachamara ubi, anyị emewokwa ọtụtụ ndozi na omenala nkà. Ngwaahịa a nwere nkọwa dịgasị iche iche na atụmatụ ọrụ pụrụ iche ịhọrọ site na iji gboo mkpa gị na ọnọdụ dị iche iche, akwa akwa nke akwa ụra a bụ ọgwụgwọ 20D380T naịlọn DWR, nke nwere ike igbochi nguzogide mmiri, melite nguzogide unyi, ma kwado na-ehicha kwa ụbọchị. Egwuregwu dị n'ime na-eji akwa nylon velvet 20D 380T nylon, nwere ezigbo ume ume na ederede enyi, na-eme ka ndị ọrụ nwee ahụ iru ala.
Izu mkpuchi shei mmiri na-ekpuchi obere ihi ụra maka ihu igwe oyi
Evertụtela ụra n’oge oyi? Mgbe ị dinara n’ime akpa ụra n’ụlọikwuu gị, ịma jijiji na ịma jijiji, enweghị ike ihi ụra nke ọma n’ihi oyi, na-ege ntị n’oké ifufe, mmiri ozuzo na snow n’èzí, ị na-atụ anya inwe akpa ụra dị otú ahụ nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ụra ụra gị n’oge ihu igwe dị ezigbo oyi? Ugbu a, ọ bụ oge ka ị họrọ, ị kwesịrị a akụrụngwa.
2020 emeputa elu 90% ala jupụtara ihi ụra akpa na asọmpi price
Ọ bụrụ na ị ka na-echegbu onwe gị banyere ihe ị ga-ahọrọ akpa ụra maka n'èzí, nke a ga-abụ nhọrọ kachasị mma gị. Anyị emeela iche dị iche iche iji mejupụta ihe ndị mmadụ chọrọ maka akpịrịkpa okpomọkụ. Ma ị dị njikere ịga ebe obibi, ịrị ugwu, ịrị ugwu, ịgba ịnyịnya, ịkụ azụ, ma ọ bụ njem, ihe ọ bụla ọ bụ.
2020 factory oyi okenye n'èzí maa ụlọikwuu ọbọgwụ / goose ala na-ehi ụra akpa wholesaler
A na-ehi ụra a na-ehi ụra nke 20D 400T windproof, waterproof na dọkatụrụ adọka na-eguzogide ọgwụ naịlọn, nke dị mma ijikwa, akpụkpọ-enyi na gburugburu ebe obibi. Ọ nwere ike ichekwa okpomọkụ nke ọma, belata mgbasa mgbasa, gbochie ikuku oyi ịbanye, yana ụfọdụ ikike antibacterial, na-eme ka ọ dị ọcha na ahụike maka iji ya kwa ụbọchị.
Ihe nnochi ohuru nke 2020 ihe eji eme okomoko nke oma oche ala
Otu n'ime akpa ụra na-ewu ewu kachasị mma maka njem, ịnyịnya ígwè, azụ azụ na ebe a na-ama ụlọikwuu, Light Luxury bụ ngwaọrụ kachasị amasị n'ime ndị njem na ndị njem njem, ọ bụkwa nhọrọ kachasị elu maka ndị ahụ na-achọ ịnwụ ọkụ n'elu ugwu mgbe oge ọ bụla.
Hot ire magburu onwe mmiri ọgwụ ọchụ windproof mummy na-ehi ụra akpa maka agha dinta
A na-ahazi akpa ndị a na-ehi ụra dijitalụ maka ndị agha, ndị na-eme nchọpụta, ndị na-achụ nta na ndị na-akwado ndị agha. E nwere ụdị agba dị iche iche maka nhọrọ, nke nwere ike ịdị mma n'ọtụtụ ala dị iche iche, dị ka oke ọhịa, ọhịa, ugwu wdg. Ejiri 20D 380T Nylon akwa ndị a, nke na-enweghị ikuku, mmiri na-asọ oyi, nkwụsị-nkwụsị, nnukwu ọkụ na ụfọdụ ndị ọzọ magburu onwe arụmọrụ.
Solid agba splicable otu envelopu ihi ụra akpa na kemwepu okpu OEM
Nke a bụ envelopu ihi ụra nke nwere agba dị iche iche na ọrụ pụrụ iche. Ọ bụ ihe ama ama n'ọtụtụ mba n'ihi na ọ bụghị naanị akpa ụra a ka enwere ike iji wee pụọ mgbe ị mara ụlọikwuu, kamakwa n'ụlọ. Elu nke akwa a na-ehi ụra bụ nke 20D 320T ma ọ bụ 20D 380T naịlọn. A na-edozi akwa ọ bụla n'ụzọ pụrụ iche, nke nwere ike ịkụda nguzogide na mgbochi mmiri. Ọ nwere nguzogide ifufe siri ike, na-eme ka ngwaahịa ahụ dịgide ma dị mfe ihicha. Ihe dị n’ime akwa ụra a bụkwa 20D 320T ma ọ bụ akwa nylon 20D 380T.
2021 agba agba mara mma juputara na akpa ihi ụra
Egwu kpochapụwo mummy na-ehi ụra bụ ihe nlereanya nke ndị ọkachamara na-ewu ewu. N'oge usoro mmepụta, anyị emegoro omenaala oge ochie iji melite ikpo ọkụ na nkasi obi. N'otu oge ahụ, zoo aka na agba ndị na-ewu ewu ugbu a iji mee ka ị chọọ ịma ụlọikwuu na njem. Enwere nhọrọ ndị ọzọ ejiji. Elu dị n'èzí nke akwa ụra a bụ 20D 320T Nylon fabric, na mgbochi na-egwu mmiri na ọgwụgwọ mmiri na-asọ oyi, na-eme ka ọ dịgide adịgide ma na-eguzogide unyi ma dị mfe ihicha. The lining ákwà ka nke 320T pongee breathable na velvet na-eguzogide ọgwụ ákwà aka ọrụ nkasi obi. Ime jupụtara na 800g 80% ọbọgwụ ala, na ngụkọta arọ bụ gburugburu 1050g.
Abụọ-agba kpachie oge ufodu envelopu na-ehi ụra akpa nwere ike jupụta na ala n'oge oyi
Nke a bụ akpa ihi ụra na-ewu ewu nke nwere ụdị agba agba nwere agba abụọ, ezigbo ejiji, ma bụrụ onye ewu ewu na nyiwe e-commerce dị iche iche. Ọ bụghị naanị na ọ nwere echiche dị mma, mana ọ dịkwa oke nlezianya na mmepụta. A na-eji akwa dị n'èzí mee 20D 380T Nylon na ọgwụgwọ pụrụ iche. Ọ nwere ọrụ nke ịkwapụ nkwụsị na mgbochi mmiri, nke dị mfe maka nchekwa na nhicha kwa ụbọchị. Fabricdị dị n’ime jiri eriri polyester 20D 380T mee ihe, nke nwere ikuku ikuku dị mma, dị ezigbo nro na ntụsara ahụ. Ntinye dị n'ime ya bụ 90% ọbọgwụ ma ihe ndozi bụ 800g.
Single Envelopu Splicable Ihi ụra akpa na Solid Agba maka opupu na mgbụsị akwụkwọ
A na-emegharị akpa ụra a na-adabere na akpa ụra envelopu oge ochie, nke dabara adaba maka ezinụlọ ndị na-achọ ịma ụlọikwuu na mmiri na ụbịa. A na-eji akwa akwa ụra a dị n'èzí nke akwa ụra a 20D 380T akwa akwa naịlọn, ọ na-ejikwa mmiri na-asọ oyi, bụ nke na-eguzogide ọgwụ na mfe ma dị ọcha n'oge eji; a na-eji akwa polyester 20D 380T mee akwa ahụ dị n'ime, nke dị nro ma dị nro.